> Resource > Beddelaan > Sida loo Encode files H.264 la H.264 Encoder
H.264 waa mid ka mid ah qaabab video ugu weyn loo isticmaalo riixo, qaybinta iyo duubo waqtiga xaadirka ah. Oo waxay baqdin ah ee awooddeeda ah bixinta qeexitaanka sare video, Deji files H.264 ka kale qaabab video uu noqday iyo aad u badan oo caan ah. , Sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si jeer encode videos aad galay H.264 qaab video for isticmaalka. Si aad u qaban, waxaad u baahan tahay encoder xirfadle H.264 caawimaad. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa mid aad u weyn, taas oo kuu ogolaanaya in aad encode kasta video oo caan galay tayo sare leh H.264 videos for qaybinta ama la wadaago si fudud.
App Taas ayaa ka dhigaysa mid aad u fudud oo degdeg badan si encode files H.264 ka kale oo file video. Tallaabooyinka ugu waaweyn ee gebi ahaan jira saddex qasabno fudud. Intaa waxaa dheer, tan encoder H.264 smart ku siinayaa dabacsanaan dheeraad ah si ay u dejiyaan-beegyada uu Deji sida heerka yara, heerka jir iyo xallinta video iwm Haddii aad leedahay dhowr video files si encode files H.264, waxaad iyaga encode karaa in Dufcaddii. Hoos waxaa ku hage tallaabo-tallaabo. Ka hor inta aadan u raacaan, dejisan iyo rakibi version saxda ah ee this software Deji H.264 hore.
1 videos Add to encoder H264 ah
In dhinaca kore ee bidix ee interface hadda this H.264 Deji app ee si toos ah, riix badhanka xitaa aad disk adag iyo shuban, kuwaas oo warbaahinta faylasha aad rabto in aad encode. Haddii kale, si toos ah jiidi & jeedi video deegaanka files si H264 encoder ee Murayaad bidix. Marka lagu sameeyey, oo dhan videos lagu dari karaa, ka muuqda shaxanka soo.
2 Dooro H264 sida qaab wax soo saarka
Si aad u dooratid H264 sida qaab wax soo saarka, ugu horreeya oo dhan, waxaad u baahan tahay in la furo qaab saarka suuqa kala H.264 encoder ee. Tag guddi Qaabka Output dhinaca midig, guji liiska dropdown ah, dedeg "qaab"> "Video" qaybta qaab saarka suuqa kala pop-up ka, ka dibna si fudud ku dhacay "MP4 Video" ee doorasho.
Marka lagu sameeyey, waxaad u baahan tahay in la sii wado in la garaaco qalabka-sida "Settings" ikhtiyaarka hoose ee guddiga Qaabka Output ah. Markaas suuqa kala socda Dejinta, H.264 dhigay sida encoder video ah. Haddii u baahan tahay, waxa kale oo aad sameyn kartaa kale qaar ka mid ah koobin Deji loo baahdo waxaa, sida xal video, heerka jir video, video & heerka yara audio iwm
3 files Encode H264
Markii wax walba la dhamaystiro, riix "Beddelaan" rukun ee hoose ee midigta ah interface ugu weyn H264 encoder ee ay u bilaabaan Deji files H264 ka ku dhowaad mid ka mid ah aad video files. app Tani waxay ku dhamaysan karaan dhamaan hawlaha qaab beddelidda, si dhaqso ah superfast iyo video tayo sare leh wax soo saarka.
Markii geeddi-Deji la sameeyo, ka tago si hoose ee interface hadda barnaamijkan iyo waxaa riix "Folder Open" badhanka si aad u hesho wax soo saarka files H264. Ogsoonow in files kuwani waa la .mp4 kordhin. Hadda, si weyn uga faaiidaysato oo ka mid ah files H.264 encoded.